Hobomboleettiin Rooba Cimaa makate Ameerikaa kutaa Flooriidaa rukute - NuuralHudaa
Hobomboleettiin Rooba Cimaa makate Ameerikaa kutaa Flooriidaa rukute
On Oct 11, 2018 13
Hobomboleettiin Rooba Cimaa makate kan Hurricane Mikael jedhamu kun Kaaba Lixa Flooridaa kan rukute yoo tahu, rooba cimaa fi dambalii galaana irraa ka’een magaalotni qarqara galaanaa jiran heddu miidhamanii jiru. Hobomboleettiin Sa’aatii tokkotti Kilomeetra 250 bubbisu kun mukaa fi manneen heddu kan kuffise akka tahee fi magaalaa Panhandle jedhamtu keessatti nama lama kan ajjeese tahuu gabaafame.
Kutaalee Ameerikaa Flooridaa, Joorjiyaa fi Alaabaamaa keessatti balaa hobomboleettii kanaan jiraattota 500,000 irraa humni elektrikii citee jira. Namoonni 300,000 ol ammoo qe’ee isaanii lakkisanii kan baqatan tahuu gabaafame. Bubbeen cimaan akkanaa Flooridaa rukutee kan hin beekne tahuu gabaasni BBC ni ibsa.